အင်တာနက်အသုံးပြုမှု၏အမှောင်ဘက် - ဖင်လန်နိုင်ငံ၏အစောပိုင်းနှင့်နှောင်းပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များအကြားတွင်အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းလက္ခဏာများ၊ ကျောင်းမီးလောင်ခြင်းနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှစ်ရှည်လေ့လာခြင်း (၂၀၁၆) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်
အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ The Dark Side: နှစ်ဦး longitudinal အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏လေ့လာရေး, စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများ, ကျောင်း Burnout နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးဖင်လန်အစောပိုင်းနှင့်နှောင်းပိုင်းပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း (2016) တွေထဲမှာ
J ကိုလူငယ်မြီးကောင်ပေါက်။ 2016 မေလ2။
Salmela-Aro K သည်1,2, Upadyaya K သည်3,4, Hakkarainen K သည်5, Lonka K သည်6, Alho K သည်5.
မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောသုတေသနများအရကျောင်း၌ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ခြင်းနှင့်ကျောင်းသားများ၏လူမှု - ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအလားအလာရှိသောပြproblemsနာများ၊ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ၊ ကွန်ပျူတာများ၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့်အတူတစ်ချိန်တည်းတွင်လူမှု - ဒီဂျစ်တယ်ပါ ၀ င်မှုသည်အထွေထွေနှင့်ကျောင်းနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြproblemsနာများကိုသက်ရောက်စေသည့်အပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများကို ဦး တည်စေနိုင်သည်။ အစောပိုင်း (အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၄ နှစ်) အတွင်း ၁၇၀၂ (အမျိုးသမီး ၅၃%) နှင့် ၁၆၃၆ (အမျိုးသမီး ၆၄%) ကြားတွင် (၁၆-၁၈ နှစ်) စုဆောင်းခဲ့သောရှည်လျားသောအချက်အလက်လှိုင်းနှစ်ခုကို အသုံးပြု၍ ဖင်လန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များ၊ နှင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေ။ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းပုံစံတွင်ဆယ်ကျော်သက်အုပ်စုနှစ်စုလုံးအကြားအလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ကျောင်းအလွန်အမင်းမီးလောင်ခြင်းတို့အကြားအပြန်အလှန်ကူးလူးနေသောလမ်းကြောင်းများတွေ့ရှိရသည်။
ကျောင်းက burnout နှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအကြားအပြန်အလှန်လမ်းကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မိန်းကလေးများပုံမှန်အားနှောင်းပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်, ကျောင်း burnout စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေထဲကနေယောက်ျားလေးများထက် ပို. ခံစားခဲ့ရသည်။ ယောက်ျားလေးများအလှည့်အတွက်ပိုပြီးပုံမှန်အားဖြင့်အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအနေဖြင့်ခံစားခဲ့ရသည်။ ဤရလဒ်သည်မြီးကောင်ပေါက်အကြား, အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုအကြာတွင်ရောဂါလက္ခဏာများ depressive ကူးဖိတ်နိုငျသောကျောင်းမှ burnout တစ်အကြောင်းမရှိဖြစ်နိုငျသညျ, ဖော်ပြသည်။
KEYWORDS: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်; စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေ; အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း, ကျောင်းစာအုပ် burnout; School တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု
မေလ 24, 2016
အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုကျောင်းက burnout ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်။ ကျောင်းစာအုပ် burnout, အလှည့်အတွက်အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်စွဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ စိတ်ထဲကတော့ Gap, ဖင်လန်၏အကယ်ဒမီများကငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့ longitudinal သုတေသနစီမံကိန်းပြည့်စုံကျောင်းနှင့်အထက်အလယ်တန်းကျောင်းတွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်စွဲနှင့်ကျောင်း burnout အကြား link တစ်ခုထူထောင်ခဲ့သည်။ ဖင်လန်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များအတွက်မေလ 2016 အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် လူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်.
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ကနေတစ်ဆင့်ကြောင်းပြသ ကျောင်းက burnoutဆယ်ကျော်သက်များ၏အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုသည်စိတ်ဓာတ်ကျစေနိုင်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကကျောင်းကိုစိတ်ဝင်စားမှုပြတ်သွားပြီးကျောင်းအပေါ်သံသယဝင်နေရင်ဒီဂျစ်တယ်စွဲလမ်းမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်။
သုတေသနအရဒစ်ဂျစ်တယ်စွဲလမ်းမှုနှင့်ကျောင်းမီးလောင်မှုပြoutနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အဓိကကျသောအဆင့်မှာအသက် ၁၃ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အထိဖြစ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏စိတ်ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်နှင့်အင်တာနက်အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကိုတားဆီးရန်အတွက်ထိရောက်သောနည်းလမ်းမှာကျောင်းတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်၊ သင်ယူရန်ကျောင်းသားများ၏လှုံ့ဆော်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ကျောင်းမှမီးလောင်ကျွမ်းခြင်းကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
နှောင်းပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကျောင်း burnout ယောက်ျားလေးများထက်မိန်းကလေးများအကြားတွင်ပိုပြီးဘုံဖြစ်ကြသည်။ ယောက်ျားလေးများမိန်းကလေးတွေထက်အလွန်အကျွံအငျတာနကျအသုံးပွုခွငျးမှပိုပြီးခံစားကြရသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှု 12-14 နှင့် 16-18 အသက်ဟယ်လ်စင်ကီမြီးကောင်ပေါက်အကြားထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏ယခင်အုပ်စုတစ်စု6တှငျမှေးဖှားအောက်ပိုင်း-ကျောင်းကို 2000th တန်းကျောင်းသူလေး၏ပါဝင်သည်။ နှောင်းပိုင်းမြီးကောင်ပေါက် 1997 တှငျမှေးဖှားပထမဦးဆုံးနှစ်အထက်အလယ်တန်းကျောင်းတွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများဖြစ်ကြသည်။ 3,000 ကနေအားလုံး 33 ဟယ်လ်စင်ကီထက်ပိုမြီးကောင်ပေါက်ခုနှစ်တွင်အနိမ့်ကျောင်းများနှင့် 18 အထက်အလယ်တန်းကျောင်းများတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါအကယ်ဒမီ-ရန်ပုံငွေစီမံကိန်းကိုအလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအကြားအပြန်အလှန်အသင်းအဖွဲ့များရှာဖွေစူးစမ်းပထမဦးဆုံး longitudinal လေ့လာမှုဖြစ်ပါသည်, ကျောင်းကထိတွေ့ဆက်ဆံမှု, ဆယ်ကျော်သက်အကြားကျောင်း burnout နှင့်စိတ်ကျရောဂါ။ ဒီနေ့လူငယ်များကို 'ဒစ်ဂျစ်တယ်ဇာတိ' ဟုခေါ်ကြသည်။ သူတို့သည်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့်လူမှုမီဒီယာများဖြင့်ကြီးပြင်းလာခဲ့သည့်ပထမဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းနှစ်ခုရှုထောငျ့ရှိပါတယ်။ တဖကျတှငျမူအစောပိုငျးကသုတေသနအင်တာနက်အကြာတွင်လေ့လာမှုများနှင့်နောက်ဆုံးမှာအလုပ်ခွင်ထဲမှာအသုံးဝင်သောဖြစ်ကြောင်းအရေးကြီးပြီးပျြောမှေ့စလူမှုရေးအတွေ့အကြုံများကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ၏သင်ကြားနည်းကိုအသုံးပြုခြင်းကိုလည်းသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာစိတ်ဝင်စားယူလူငယ်များထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လာအောင်နှိုးဆွနိုင်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒစ်ဂျစ်တယ်စွဲလည်းထဲမှာ burnout ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် မြီးကောင်ပေါက် ပင်စိတ်ကျရောဂါဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။
နောက်ထပ် Explore: စိတ်ပညာရှင်လင့်များ burnout နှင့်စိတ်ကျရောဂါ
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: ဖင်လန်အစောပိုင်းနှင့်နှောင်းပိုင်းပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းများထဲတွင်နှစ်ဦး longitudinal အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏လေ့လာရေး, စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများ, ကျောင်း Burnout နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေး: Katariina Salmela-Aro et al, အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း၏ The Dark Side လူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ် (2016) ။ DOI: 10.1007/s10964-016-0494-2
ဂျာနယ်ရည်ညွှန်း: လူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ် ပေး: ဖင်လန်၏အကယ်ဒမီ